ikhaya AMANQAKU E-FOOTBALL AMAZWE Abadlali bebhola ekhatywayo abangamaNgesi IJoe Willock Ibali loBuntwana kunye neNqaku leMbiniso yeWorold
I-LB ibonisa iNqaku elipheleleyo leGlawu yebhola eyaziwayo ngegama lesidlaliso "Joe". Ibali lethu leJoe Willock Childhood Ibali kunye ne-Untold Biography Facts ikulethela iakhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawuleyo ukususela ngexesha lakhe lobuntwana ukuza kuthi ga ngoku.
Ubomi bukaJoe Willock- Amaxesha okuqala ukuza kuthi ga ngoku. Ityala kwi iimpendulo kunye ne-Twitter
Ewe, wonke umntu uyazi ukuba ungomnye wolutsha olunomdla olunamathemba amakhulu. Nangona kunjalo, bambalwa kuphela abajonga i-biography kaJoe Willock enomdla kakhulu. Ngoku ngaphandle kokudibanisa okunye, masiqalise.
IJoe Willock Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Ubomi bokuqala kunye neNtsapho yaseMvelaphi
UJoseph George Willock wazalwa ngomhla we-20th ka-Agasti 1999 kwiLondon Borough yeWaltham Forest, e-United Kingdom. UWillock wazalwa njengomntwana wesithathu kunye nomncinci kubazali bakhe- umama othandekayo notata omhle-onjeya ogama linguCharles.
Dibana nabazali bakaJoe Willock. Ityala kwi IArsenalFC
Ngoku ka Nguyen UK, Emva kokuzalwa kwakhe kwaqwalaselwa ngoogqirha ukuba banokungafani kakuhle emlenzeni. Oku kuthetha ukuba enye imilenze yakhe imfutshane kunenye. UJoe ohlwempuzekileyo kuyo yonke iminyaka yobomi bakhe yokuqala kwafuneka oyise iingxaki zomzimba nezengqondo ezazibangelwa koku kusilela. Oku kuchaphazele isantya sakhe ukuza kuthi ga ngoku kwaye sesona sizathu sokuba engoyena ugqwesileyo.
Imvelaphi yosapho lukaJoe Willock: Nangona wazalelwa eNgilane, kodwa usapho lukaJoe Willock lwendabuko ye-Afro-Caribbean. Banengcambu yeentsapho zabo ukusuka eMontserratia, Ingingqi yaseBritane engaphaya kwesiqithi kunye nesiqithi esikwiCaribbean. Njengoko kubonwe ngezantsi, iMontserratia sisiqithi esiphazamiseka kakhulu ngokugqabhuka kweentaba-mlilo ngexesha le-1990s.
UJoe Willock uneMvelaphi yakhe yoSapho kunye neengcambu ezivela eMontserrat
Phakathi kwe-1995 kunye ne-2000, ukuqhuma kwentaba-mlilo kunyanzelise isibini kwisithathu sabemi besi siqithi ukuba basabe, ikakhulu e-United Kingdom. Kuncinci okwaziwayo ukuba abazali bakaJoe Willock babephakathi kwabo babalekela e-United Kingdom ngaphambi kokuba uJoe unyana wabo azalwe kwi-1999.
Obomi bakwangoko: UJoe Willock ukhulele kwihlathi laseWaltham kunye nabantakwabo ababini ogama linguMatty noChris. Emva phaya, usapho lwayo, olukuMantla Mpuma weLondon lwalungekude kangako kwibala lase-Arsenal elidlulileyo i-Highbury. Le nto ikufuphi yakhokelela ekusekweni kwekhaya elinebhola ekhatywayo. Umnqweno womdlalo wenza ukuba onke amakhwenkwe amathathu (uMatty, uChris, noJoe) enze iingqondo zabo kwimfuno yokuba ngabadlali bebhola ekhulayo xa sele bekhulile.
Imvelaphi Yentsapho: UJoe Willock wayevela kwimvelaphi yosapho-engezantsi. Bobabini umama notata bakhe babengezizityebi kwaye bahlala betsala nzima ukugcina usapho lwabo luqhubeka. UCharles nenkosikazi yakhe bake bayeka imisebenzi yabo ukuze babone ukuba abantwana babo bayaphumelela.
IJoe Willock Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Imfundo kunye neBraduer Buildup
Utata onempembelelo: UCharles Willock, utata okhatywayo webhola ekhatywayo kunye neqela eliqhuba ukurhweba kwintsapho yakhe wagqiba ekubeni athathe uhambo lokuguqula oonyana bakhe abathathu babe ngabadlali bebhola.
UJoe Willock Umsebenzi Wokwakha. Ikhredithi kwiArsenal nakwi-DMail
UCharles wafundisa uJoe kunye nabakhuluwa bakhe ukuba bangaze babuyeke kwimiceli mngeni, ebasa kwiipaki ezahlukeneyo zebhola ukuya kuqeqesho kunye nokuthatha inxaxheba kukhuphiswano. Uphembelele i isiphelo soonyana bakhe kwaye wenza konke okusemandleni abo ukuba baphumelele iimvavanyo kunye nezifundo eziphambili zebhola.
Utata onenhlanhla ubone umbono wabantwana bakhe usebenza ngaphandle ngendlela afuna ngayo. UMatty, unyana wakhe wokuqala wabizelwa izilingo kunye no-Arsenal academy, uChris noJoe Willock balandelayo emva koko. Uvuyo lwalo lonke usapho lwalungenamida emva kokubona onke amakhwenkwe amathathu edlula kwiimvavanyo kwimibala ephapha kunye nokungeniswa kwi-academy yeArsenal.
IJoe Willock Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Ubomi bokuqala
UJoe Willock ukuthanda ibhola kwambona esayina isivumelwano sakhe sokuqala kunye neArsenal eneminyaka eyi-4. Kuyise uCharles notata wakhe obonakala ejonge phambili, yonke le nto yayiqinisekisa ukuba omnye woonyana bakhe uyenza kwiqela lokuqala.
UJoe Willock Ubomi boMsebenzi waseBudaleni. Ityala kwi Arsenal FC
Bobathathu abantakwabo- uMatty, uChris noJoe bonke benza ibakala kwiiGunners. Baphupha ngokuba yi-trio yokuqala yabazalwana ukuba badlale kwiPremier League kunye. Utata wabo uCharles wawushiya umsebenzi wakhe hayi nje Ukuhamba noonyana bakhe ukuya kufunda, kodwa ukubanceda kulawule imisebenzi yabo yebhola ekhatywayo. Njengoko uJoe Willock wayekhe wakubeka oko;
“Ekukhuleni kwam, ngutata wam kuphela umntu endikukhathaleleyo ukwenza amagqabantshintshi kwimidlalo yam. Emva kwemidlalo, undixelela ukuba ndidlale kakuhle okanye kakubi. Andimameli omnye umntu ngaphandle kotata wam ”.
Bobathathu aba bazalwana baqhubela phambili ngokuhamba kweminyaka de kwaba yinto engalindelekanga yenzeka komnye kwaye kamva, amakhwenkwe amabini eWillock.
IJoe Willock Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Indlela eya kwiNdaba ibali
Ayizizo zonke izinto ezihambe kakuhle kubafana baseWillock ngexesha labo lokukhula kunye neArsenal. UmntakwaboJoe uMatty wakhululwa eneminyaka eyi-15 ngenxa yokusebenza okungonelisi. UChris, kwelinye icala, wagqiba ekubeni ahambe e2017, walibangisa ePortugal ukuze aqhubeke nomsebenzi wakhe. NguJoe Willock kuphela komntu oshiyekileyo. Ukuthetha ngamava, wakhe wathi;
“Kwakufuneka ukuba mna kunye nabantakwethu sahlukane sihambe ngeendlela ezahlukeneyo. Ndayibona isiza. Ndiyazi ukuba ixesha laliza kuza, ngolunye usuku apho sasingekhe sonke ukuba kunye. Akuzange kube lula kum xa uChris esiya ePortugal. ”
KuJoe, kwakunzima ngokwenene kuye ukuba amthathe xa umntakwabo-mdala uChris wayehamba esiya eBenfica. Bobabini abantakwabo ababesondele kakhulu bahlala behleli ukususela oko bezalwa.
Sasihlala kwigumbi elinye kwigumbi elinye. Oku kucacisa ukusondela kwethu. Ukuhamba kukaChris, ibingathi isiqwenga sam sishiywe lusapho lwethu ” utshilo uJoe Willock owayenengxaki yebhola yakhe ngala maxesha.
IJoe Willock Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Ukunyuka Kwidumo Ibali
UJoe Willock ekugqibeleni uye waqhubela phambili njengeukuqwenga umdlalo weqela lokuqala yaba liphupha lakhe lokugqibela. Impumelelo yakhe yokuqala yezemidlalo yeza ngaphambi kokuba ayigqibe umsebenzi wakhe wobutsha. Eli yayilixesha lokunceda abadlali bakhe be-U17 ekuphumeleleni iNdebe yexesha elizayo.
UJoe Willock ugqatso lokuqala kwiminyaka yobomi bakhe bobutsha. Ityala kwi-Twitter.
Kwi-2017, uJoe Willock wabizwa kwiqela eliphezulu laseArsenal. Kwakuloo nyaka wafumana imbasa yakhe yokuqala (i2017 FA Community Shield) ngaphandle kokudlala kolu khuphiswano.
UJoe Willock- Ukubhiyozela indebe yakhe yokuqala njengomdlali omkhulu
Ukucacisa uMama: Umzuzu wokuma kukaJoe Willock kwihempe yeArsenal wafika ngoMeyi we2019 xa wathatha indawo kaMesut Ozil owayengafezekanga kumdlalo wamanqam we-Europa League. Ukuxabisa abalandeli beArsenal akuzange kuqapheleke njengoko babenomdla wokumbona esiba iqela lokuqala rhoqo.
Kodwa endaweni yokuqhekeka, umdlali wasembini wakhula esuka emandleni esiya emandleni. UJoe Willock's Umzuzu wokuma olandelayo uza ngexesha leNdebe yeHlabathi ye2019 yeHlabathi. Ngeli xesha, wenza umsebenzi oqaqambileyo ngokuchasene nabadlali beBayern. UWillock usebenzise lo mdlalo ukuthumela ingxelo kubalandeli ukuba angakhuphisana neyona nto ibalaseleyo.
Okomzuzu uWillock aphumelele iintliziyo zeArsenal Fans. Ityala kwi Ilanga
UJoe Willock ekuqaleni kwexesha le-2019 / 2010 liqhubekile nokunyamezela ukunyuka kweMeteoric kunye neArsenal. Wazibona esiba yeyona ndawo ishushu yeyona ndawo ibambekayo kwiklabhu, i-feat eyayizuza ikhontrakthi yexesha elide kunye neklabhu.
UJoe Willock ezalisekisa amaphupha akhe obuNtswana. Ityala kwi Arsenal FC
Kudala, umfana omncinci ojoyine iArsenal eneminyaka emine, kamva, wasala yedwa ukuba abhabhe iflegi yaseWillock ngaphandle kwabantakwabo, ngoku ephila amaphupha akhe. Bonke abanye, njengoko bethetha, ngoku iimbali.
IJoe Willock Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Ulwalamano lobomi
Ngokunyuka kwakhe ukuba nodumo, kunokwenzeka ukuba abalandeli abaninzi baye bacamngca ngalo mbuzo; Ngubani intombi kaJoe Willock? Akukho kukhanyela izibakala zokuba imbonakalo yakhe intle ayinokumenza umdiliya odadayo kumanenekazi.
Ngexesha lokubhala, kubonakala ngathi uJohn Willock uye wakhetha ukugxila kwimisebenzi yakhe eshiya ingcebiso yokuba nentombi okanye umfazi. Nangona kunjalo, kukho amahlebezi okubonisa ukuba wayekhe waba nentombi.
Isikhalazo: Njengoko kuchazwe yi-TheSun, uJoe Willock wayekhe watyholwa ngokulandela emanyathelweni ebekade engengomakhwenkwe ombi weArsenal Ashley Cole -Ukufumana amanqaku kunye nentombazana yangaphambili ye-ace. Isenzo sikaJoe sabona abalandeli bembona ephuhlisa umfanekiso-oyinkwenkwe ongendawo kwisandi.
Ngokuka TheSun, Kwatyholwa ukuba uJoe Willock wammemela eLondon, wamthengela amatikiti e-Eurostar wamsa kwiklabhu yasebusuku ekhethekileyo apho bobabini basela iziselo ezixabisa i- $ 2,500. Emva koko, bobabini uJoe nentombi yakhe babuyela kwigumbi eliqeshwayo eKensington apho bahlala khona ubusuku bonke kunye nalapho, wabonwa etshaya molo * py cr * ck.
Isityholo sikaJoe Willock sokuthandana ne-Eglantine-Flore Aguilar. Ikhredithi kwi-TheSun kunye nee-FabWag
IJoe Willock Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Iinkcukacha zobomi bomntu
Ukwazi ubuntu bukaJoe Willock kungakunceda ufumane umfanekiso opheleleyo ngaye. Nokuba ujongeke ngokulula, uJoe ngumntu obeka amandla amaninzi kwimfuno yakhe yokufezekisa phantse nayiphi na into ayifunayo kuye nakweyiphi na indawo yobomi azimiseleyo kuyo.
Inqaku loBomi bukaJoe Willock
Kwakhona kwinqaku lomntu, uJoe Willock ubonakala njengomntu otshintshileyo, obonakala elandela indlela eya ebulungiseni ngenxa yeenkolelo zakhe. Lo mfanekiso ungezantsi ushwankathela inkolo yakhe uyakholelwa nokuba uvela kwikhaya lamaKristu.
Kucacile uJoe Willock Inkolo
IJoe Willock Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Ubomi beNtsapho
Ngaphandle kwamathandabuzo, usapho lakwaWillock lubonwa njengenye yeentsapho ezimbalwa zebhola eziphumeleleyo kunye uninzi lokuthobeka kweziqalo. Apha sikulethela ulwazi olongezelelekileyo malunga nawo onke amalungu osapho.
UJoe Willock Tata: Sonke siyayazi ngemizamo kaCharles yokuqinisekisa ukuba oonyana bakhe babe ziingcali, ngaloo ndlela bambone njengomphathi kubantwana bakhe. Nangona kunjalo, angokulandelelana Umdlalo webhola ekhatywayo, UCharles Willock ukwangumhlalutyi webhola ngokubhaliswa kwiWyscout, iqonga lebhola elimnika ulwazi lwedijithali kunye nokuhlaziywa kwiiklabhu ezingaphezu kwe-1,000. Eli qonga limvumela ukuba akwazi ukulandelela imidlalo yoonyana bakhe kunye nezinye iindawo zeshishini ngebhola. "Ujonga yonke imidlalo yethu kunye neekliphu nganye nganye ephindaphindiweyo, ”Utshilo uJoe Willock
Umama kaJoe Willock: Kuncinci okwaziwayo malunga nomama kaJoe njengoko kucingelwa ukuba uphila ubomi bokuthula. Oku akumnqandi unyana wakhe wokugqibela uJoe ukuba amkele esidlangalaleni wumyalezo omnandi kwi-Instagram yakhe ehamba ngamazwi akhe;
Mama, yonke le nto ndikubone usebenza ixesha lokutshintsha kwexesha, kwaye nexesha owawukade ungayiTye ukuze nditye. Amaxesha ebedla ngokundiculela ukuba ndilale ezingalweni zakho emva kokuba ubuyile emsebenzini. Ndiyakuthanda Mama. Usuku lokuzalwa olumnandi!!
UJoe Willock wanikezela ngeNjongo kuMama wakhe kumyalezo omnandi otsalela ukuthandwa ngu24K.
UJoe Willock Brothers: Ubusazi?… Abantakwabo bakaWillock- uMatty noChris zange baphulukane nje neArsenal ngaphandle kokujoyina iiklabhu ezingcono. Xa uMatty wakhululwa kwi-15, wafumana iimvavanyo zokudlula ngethamsanqa kunye neManchester United ngaphambi kokuba ashiye iGillham. UChris, kwelinye icala, wathatha urhwebo kunye neBenfica emva kokutshintshela eLondon eLisbon.
IJoe Willock Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - LifeStyle
Ukwenza isigqibo phakathi kokusebenza kunye nolonwabo akuyonto inzima kuJoe Willock njengoko eyazi indlela yokulawula imali yakhe ekutshekeni. Ngombulelo kwisiseko esihle esivela kubazali bakhe uJoe akaphili ubomi obuzolisayo obonwa ngokulula ziimoto ezinamaxabiso aphezulu.
IJoe Willock Indlela yobomi- Uphila ubomi obulula AKUKHO namnye onokubonwa lula nguLuxury.
IJoe Willock Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Inyaniso engekho
OBUCHULE BESITHATHU BONKE BABONELA IIMFUNO ZABO: Ubusazi?… Bobathathu oobhuti abathathu bakhe badlala kunye kumdlalo wePremier League. Ngaphandle koluhlu kubudala, abathathu badlale kumdlalo omnye kwi I-Premier League 2.
Abazalwana bakaWillock. UMatty umi phakathi (phakathi), uChris (ngasekunene) noJoe (ngasekhohlo). Ikhredithi kwiDailyMail
UMatty oboniswe ngentla apha edlalwe ngehempe yeRed Devils kwaye umncinci (uJoe Willock) uphume ebhentshini ukuya kujoyina umntakwabo uChris kumdlalo wePremier 2 owenzeka malunga nenyanga kaMeyi 2017.
I-Wizard ye-Oz: Abanye abalandeli bambiza ngokuba yiWizard ye-Oz kuba nje edibene naye UDani Ceballos uphakathi kwabo baphakathi beqela abazimisele ukumgxotha uMesut Ozil kwisikhundla sakhe njengomdlali weqela lokuqala. U-Ozil kangangezihlandlo ezininzi wayebukele ngaphezulu kwegxa lakhe ngenxa yokhuphiswano lwendawo yakhe.
UJoe Willock ngomnye wabadlali beArsenal abazimisele ukugxotha u-Ozil. Ityala: Ilanga
QHUBEKA: Enkosi ngokufunda ibali lethu leJoe Willock yobuntwana kunye neNqaku leMbali leBinold. Ku- LifeBogger, silwela ukuchaneka nokulingana. Ukuba ufumana into engabonakali kakuhle, nceda usabelo nathi ngokuphawula ngezansi. Siya kuhlala sixabisa kwaye siyihlonele imibono yakho.
I-Chris Smalling Childhood Indaba I-Untold Biography Facts